Ngosi ihe osise (site na WikiMedia Commons)
Anọ m na-eme ọtụtụ afọ ojuju n'oge na-adịbeghị anya; ị maara, ụdị ejiji kachasị ọhụrụ na ọdịnaya dijitalụ. Ma ọ dịkarịa ala, enwere m olileanya na ọ bụ ejiji, n'ihi na ọ bụ ọmarịcha mmepe na-atụba mmiri na ọrụ nke nnyefe akpaaka.
N'ihe banyere otu onye ahịa, anyị na-ahọrọ akụkọ iri kwa izu iji zipu ha na Twitter na Facebook peeji nke. Akụkọ ndị ahụ emetụtaghị ngwaahịa ndị ụlọ ọrụ na-ere, mana ha nwere mmasị ma ọ bụ nchegbu n'ihi na ha metụtara ngalaba azụmahịa nke ụlọ ọrụ ahụ. Iji jiri a hackneyed nkebi ahịrịokwu, ọ bụ a “uru-tinye:” ahọpụta a pụrụ ịdabere na mpụga akụkọ nke mmasị ndị ahịa na-ewuli ntụkwasị obi na-egosi ha dị ka isi iyi nke eziokwu.
Ngwa Akụkọ Google, bụ onye gbagooro wee malite ịnwale ngalaba "Editor Pick" na nsonaazụ ha. Mashable nwere ọmarịcha ọkwa banyere mmepe a, mana kwe ka m chịkọta: companylọ ọrụ ahụ esonyerela ndị nkwusa dịka Nkọwa.com, Reuters na Washington Post ndị na-eji aka ha ahọpụta akụkọ ndị dị mkpa iji nyefee n'akụkụ njikọ akụkọ na-akpaghị aka na-aga n'ihu iji hazie ịnyefe ọdịnaya.
Ọbụghị naanị na afọ ojuju mmadụ nke a bara uru site na ngosipụta akụkọ, na-adọrọ uche gaa na akụkọ ndị nwere ike ịdị oke mkpa maka ịmara ọha mmadụ, mana ọ nwere ike ịkọwapụta akụkọ ndị ọrụ ọdịnaya akpaghị aka nwere ike ileghara anya. Ọzọkwa, enwere uru dị na ndụmọdụ, dị ka Facebook Likes mụrụ, retweets na Twitter, na ihe ndị yiri ya.
Ọdịnaya nke akwadoro (agwo) na-adọta uche anyị n'ihi na anyị maara na mmadụ nọdụrụ ala ma chee banyere uru akụkọ ahụ bara. Ma ànyị maara nnọkọ oriri na ọ directlyụ directlyụ (ndị enyi Facebook na kọntaktị Twitter) ma ọ bụ na (Slate ma ọ bụ Washington Post editọ), anyị maara eziokwu ahụ bụ na mmadụ chere na otu akụkọ dị mkpa iji kwado ọkwa. Nke ahụ bụ mmetụta nke obi ike na ntụkwasị obi enweghị kọmputa algorithm nwere ike ịnye.
Obi ike a na-agbasa karịa nanị izipu ozi. Ndị ụlọ ọrụ na-anọghị na azụmaahịa mbipụta akwụkwọ ka nwere ike idozi ọdịnaya maka ndị ahịa ha dịka ụzọ isi nwekwuo mmata na ịre ahịa. Ọ bụrụ na ndị mmadụ mara ụlọ ọrụ A na-echebara echiche iji họrọ akụkọ dị mkpa, akụkọ dị mkpa metụtara metụtara ọdịmma m na ikekwe ọbụna na-enye aro maka enyemaka, ndị mmadụ ga-ahụ ụlọ ọrụ ahụ n'ụzọ dị mma: dị ka isi iyi a tụkwasịrị obi nke ozi nwere mmasị karịa naanị ịre wijetị .
Kedu ihe ị chere? Nchịkọta ọdịnaya ọ bara uru? Kedu mmetụta ọ na-enwe na ndị ahịa? Kwuo okwu.
Tags: google buzzgoogle webmaster ngwaọrụjunk email nzacha-eme ka ego onlineahịa mmadụahịa weebụ
Jul 14, 2010 na 5:19 PM
Nchịkọta ọdịnaya dị oke mkpa - dị ka iwu ọkọnọ na mkpa. Ndi mmadu gha enwe mmasi n’udi okwu ndi metutara ha.
Na mgbe ị na-ejuputa a ina dị ka a so dee, ị na-elekọta iji jide n'aka na ọ bụ echiche na ebumnobi. Nnukwu ihe gbasara mmatawanye na ịre ahịa ahịa.
Jul 15, 2010 na 8: 45 AM
Daalụ maka ịgụ, Chelsea. Na-eweta ihe kachasị mkpa n'uche m, na ịbụ ihe a tụrụ aro / ịkọkọ chọrọ chọrọ echiche. Ndị mmadụ mara ya ma zaghachi ya.